Maleeshiyo Isbaaro dhigtay Ceeljaale -Taliyahii Ciidanka Dowladana dhaawacay . Saxaafadu Malahan Saaxiib Joogtaa Waagacusub Media 2013
Maleeshiyo Isbaaro dhigtay Ceeljaale -Taliyahii Ciidanka Dowladana dhaawacay . 24 March 2013 Waagacusub.com-Maliishiyo beeleed maalmahaanba qas ka waday degmada Marka ayaa la sheegayaa inay isbaaro dhigteen degaanka Ceeljaale ee u dhow magaalada Marka, Maliishiyadaan ayaa shalay subaxnimadii (Jimcihii 22 March 2013) rasaas ku furay Baabuur Caasi ah oo magaalada Marka Kabaxay. Rasaastaas ayey ku dhaawacmeen 3 qof oo rayid ah, iyadoo dhaawacaasi lagu dabiibayo isbitaalka magaalada Marka. Taliye ka tirsan Milateriga Soomaaliyeed oo difaaca uga jira degaanka Janaale oo u socday Magaalada Marko ayaa maliishiyadii isbaaradu u tiilay degaanka Ceeljaale ay isla goobtii rasaas kula fureen Baabuurkii uu watay.
Taliyahaan ka tirsan milateriga Soomaaliya oo lagu magacaabo Liibaan ayaa ka dhaawacmay caloosha sida ay Waagacusub u sheegeen dhaqaatiirta Isbitaalka Marko oo qaliin ku sameeynaya Sarkaalkaas.
Maliishiyo beeleedkaan ayaa la sheegayaa inay intooda badan horey u ahaayeen Alshabaabkii joogi jiray gobolka oo qaatay tuutaha ciidamada, iyadoo la sheegay inay qaarkood la socdaan Gudoomiyaha degmada Cukaash.
Maliishiyada Isbaarada dhigatay Ceeljaale ayaa sidoo kale dhac ka bilaabay magaalada Marko .
Gobolka Shabeeladda hoose oo dhowaan qeybo ka mid ah laga xoreeyay Alshabaab waxaa qas ka wadomaliishiyo beeleedyo caqabad ku ah hawlgalada Ciidamada milateriga iyo Booliiska ee Gobolkaas.
Maleeshiyo beeleedka Biyo maal ee isbaarada dhigtay CeelJaale waxay diidan yihiin Dowladda Federalka Somalia ,waxayna nasiib darada ugu weyn tahay Dowladda Federalka oo ku dhici weysay inay isbaarada qaado ama wax ka qabato amaan xumida Shabeelada hoose.